भारतद्वारा कारोना खोप निर्यात बन्द,अब नेपालमा के हुन्छ? | Samabesi Khabar
भारतद्वारा कारोना खोप निर्यात बन्द,अब नेपालमा के हुन्छ?
काठमाडौं,१२ चैत ।
पछिल्लो केही हप्ता यता भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या तीव्र रुपमा बढिरहेको छ। दिन प्रतिदिन संक्रमण दर बढ्दै गएको र आफ्नो देशमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टले अवस्था थप भयावह हुन सक्ने भन्दै आन्तरिक माग पूरा गर्नका लागि तत्कालका लागि भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गर्दै आएको अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप ‘कोभिसिल्ड’ अरु देशलाई नदिने भएको छ।
भारतको यो कदमले कोभ्याक्स योजना अन्तर्गत रहेका करिब १ सय ९० राष्ट्र प्रभावित हुने भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको अगुवाइमा विश्वका गरिब देशमा पनि खोपको समान पहुँच कायम गर्ने उद्देश्यसहित कोभ्याक्स अभियान स्थापित भएको हो।
भारतले अहिलेसम्म ७६ देशमा गरी ६ करोड भन्दा बढी खोप निर्यात गरिसकेको छ र त्यसमा धेरै अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेकाकै खोप छन्।
महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएको र संक्रमण दर बढिरहेका कारण भारतले केही समयका लागि रोक लगाएको खोप सम्बन्धी विज्ञ समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीले बताए।
उनले भने, ‘यसमा राजनीतिक कुरा आउँछ। आफ्नो देशमा संक्रमण दर बढिरहेका बेला अरु देशलाई खोप सप्लाई गर्दा उनीहरुलाई नपुग्ने हुन सक्छ जसले भारतले यो कदम चालेको हो।’
भारतले खोपमा रोक लगाए पनि नेपालमा खोप अभियान बन्द नहुने उनले बताए। उनका अनुसार ‘कोभिसिल्ड’ खोपको निर्यातमा रोक लगाए पनि ‘कोभ्याक्स’मा रोक लाग्ने छैन।
‘भारतले खापमा रोक लगाउने बित्तिकै यहाँ खोप नलगाउने भन्ने हुँदैन। वैशाख ७ गते देखि ११ गतेसम्म पहिलो चरणमा खोप लगाएका व्यत्तिलाई दोस्रो डोज लगाउन सुरु गरिने छ। त्यसपछि फेरि अर्को चरणको खोप अभियान अगाडि बढ्ने छ। हामीले योजना बनाइरहेका छौँ’, उनले भने, ‘भारतले ‘कोभिसिल्ड’ मा रोक लगाए पनि ‘कोभ्याक्स’ मा रोक लाग्दैन। यो यूएनसँग एग्रिमेन्ट गरिएको छ। भारत सरकार रोक्न मिल्दैन। ‘कोभ्याक्स’ बाट आउन सक्छ।’
सेरमले उत्पादन गरेको खोप नेपालसहितका देशले किन्नका लागि सम्झौता गर्दै गर्दा संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेका भन्दै भारतले आफ्नै देशमा खोप आवश्यक पर्ने भन्दै अप्रिलको अन्तिमसम्म खोपको निर्यात गर्न नसक्ने जनाएको छ।
तर खोप लगाउनका लागि नेपालीले केही समय कुर्नु पर्ने उनले बताए। ‘अहिले खोप निर्यातमा रोक लागेको छ। तर यो केही समय पछि खुल्छ। धेरै लामो समयसम्म यो लागू नहुन सक्छ। तर हामीले केही समय कुर्नु पर्ने भने हुन सक्छ’, उनले भने।
भारतको सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआइआइ) ले पछिल्लो दिनमा एस्ट्राजेनेकोको खोप विभिन्न देशमा पठाउन बन्द गरेको छ। यसबाट बेलायत तथा ब्राजिलसहितका देश पनि प्रभावित भएका छन्।
भारतमा बुधबार ४७ हजार भन्दा धेरैमा नयाँ भेरियन्टको संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने २ सय ७५ जनाको मृत्यु भएको छ।